Police confirm six people dead in Zim violent protest - Zimbabwe Situation
0	August 2, 2018 10:35 PM
MDC supporters took to the streets claiming Monday’s election was rigged.
Source: Police confirm six people dead in Zim violent protest – ENCA
Six people have died during violent protest in Harare following the announcement of the preliminary election results on Wednesday.
HARARE – Six people have died following violent clashes in Zimbabwe’s capital on Wednesday.
Zimbabwean police briefed the media on Thursday.
“We deeply expressed our condolences as the Zimbabwean public police, 14 people were injured and a total of 22 shops were damaged in Harare,” said Charity Charamba, Zimbabwean police spokesperson.
Zimbabweans are still waiting for Zimbabwe Electoral Commission to announce the presidential results.